Olona manana fahasembanana Mitaky ny hanitsiana ny lalàna miaro azy ireo
Mihamaro ny mponina Manasarotra ny fandaminana
Mihamaro ny olona raha Antananarivo no resahina. Misy ireo ankizy teo aloha no mitombo taona ka lasa tanora dia mameno ny arabe.
Fanokafana taom-pambolen-kazo tao Atsinanana Miisa 600.000 ireo zanakazo novolena
Toy ireo faritra rehetra dia nanokatra ny taom-pambolen-kazony koa ny fiadidiana ny minisiteran’ny tontolo iainana ao amin’ny faritra Atsinanana, tarihin’ny talem-paritra, Tezena Lionel Armando, ny alahady teo.
Lehilahy nodimandry tamin’ny fambolen-kazo Tonga naneho fiaraha-miory ny zandarimaria
Tonga nitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakavian-dRandrianantohanina Jean François Anicet,
Sabotsy Namehana Nandray ny asany ny Ben’ny tanàna Avotra Andriamosa
Nandray ny asany omaly alatsinainy 20 janoary ny ben’ny tanànan’ny kaominina Sabotsy Namehana Atoa Avotra Andriamosa taorian’ny fifidianana izay notanterahina ny 27 novambra lasa teo.
Tsaralalana sy Analakely Nitokona nanoloa ireo mpivarotra amoron-dalana
Taorian’Anosy sy Anosibe ary Mahamasina dia nitohy teny Analakely sy Tsaralalana indray ny asa fandaminana ireo mpivarotra amoron-dalana notanterahin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra omaly, niaraka tamin’ny mpitandro ny filaminana.
Fanotana vola vaovao Tsy nahatsara ny toekaren’i Madagasikara hatreto
Tokony hiankina amin’ny zava-misy amin’ny firenena ny famoronana na fanafoanana vola mivezivezy.
Kaompania Air Madagascar Vahaolana maharitra no ilaina
Ilaina ny fividianana fiaramanidina sy ny fanokafana sidina vaovao tahaka ny mankany Fianarantsoa tamin’ny fitokanana farany teo.
Tsy mbola tena misitraka ny zony feno ireo olona manana fahasembanana eto amintsika na dia efa nanao sonia sy nanaiky izany aza i Madagasikara.
Ny lalàna miaro azy ireo mihitsy no mbola mifanohitra amin’ny lalana iraisam-pirenena, hoy Radafiniantsoa Josoa, omaly tetsy amin’ny le pavé Antaninarenina ka tokony hahitsy haingana. Diso mavesatra loatra mantsy ny olana sedrain’izy ireo raha araka ny fanadihadiana natao omaly. Ankoatra ny fanilikilihana dia betsaka amin’ireo fotodrafitrasa misy no tsy mifanaraka amin’ny filàny ka ahiana hitera-doza…. Nisy omaly ny dinidinika ambany tafon-trano notanterahin’izy ireo niaraka tamin’ireo mpiara-miombon’antoka maro isan-tsokajiny. Lohahevitra ny hoe : ahoana no hahafahan’ny olona manana fahasembanana mandray anjara feno amin’ny tanjon’ny fampandrosoana lovain-jafy ? Raha izao mantsy no mitohy dia ho tratra aoriana tanteraka ny olona manana fahasembanana afaka 30 taona any ho any, hoy hatrany ny fanazavana. Marihina fa tany amin’ny distrikan’i Ranohira no nanaovana ny fankalazana ofisialy ny andro maneran-tany ho an’ny olona manana fahasembanana omaly raha nisy avokoa manerana ny Nosy. Miompana amin’ny fanafoanana ny elanelana misy eo amin’ny olona manana fahasembanana sy ny fiarahamonina ny lohahevitra novoasana hahafahan’ny rehetra mandray anjara mitovy amin’ny fampandrosoana ny firenena.